Zonke izigulane ze-tai zi zenziwa ngokumnandi, ngokukhawuleza nangokucokisekileyo. Kubonakala ngathi ayifuni umzamo. Xa besenza i-tai chi zokuzilolonga, abaninzi banxibe izicathulo kunye nezambatho eziqhelekileyo. Kodwa ngokwenene i-gymnastics kwaye iyasebenza kwaye iyanceda.
I-Tai chi-chuan, le yindlela ekhethekileyo kunye ecacisiweyo yokuzivocavoca umzimba, eyasungulwa ngo-1000 AD. e. I-Tai chi-chuan, le yindlela ekhethekileyo yaseTshayina yobugcisa bokulwa. Kwakuquka ukucamngca, ukuphefumula kakuhle, isistim sokuhamba kakuhle, okuqhubekayo okubandakanya zonke iindawo zomzimba.
I-gymnastics tai chi isondelelene kakhulu kunye neyeza, ukucamngca, ubugcisa be-kartial, kunye nokudibanisa ukuhamba okuthe gqolo kunye nokugxininisa kwengqondo. Oku kunceda ekusebenziseni amandla amakhulu, okugcina ukuvumelana kwengqondo kunye nempilo yomzimba.
Le gymnastics iqhutyelwa kumaziko aseMpuma, iiklabhu zempilo kunye nezinye iindawo. Ukuthandwa kwe-tai kuku kukhula imihla ngemihla kubonga ngokufumaneka kwayo jikelele kunye nokulula. Emva koko, loo gymnastics ingaqhutyelwa ngabantu abaneminye imisebenzi ebonakalayo engqinelanayo. Kunconywa ukuba senze i-tai chi ngokuqhelekileyo kubo bonke abantu abadala, abagulayo abane-arthritis kunye nabangaphezu komzimba.
Ukuzivocavoca rhoqo kwi-tai chi gymnastics kukuphucula ukulungelelaniswa kweminyango, ukulungelelanisa, ukulinganisela. Yenza umphumo oncedo kwi-system ye-nervous, i-cardiovascular, i-respiratory system, i-metabolism, inkqubo yokugaya ukutya, iqinisa iintambo kunye nezihlunu. Ezinye iingxelo ziqinisekisa ukuba i-tai iyinceda ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi. Enye i-tai i inciphisa uxinzelelo.
Xa ukwenza i-gymnastics isebenzisa i-tai chi, zombini umoya nomzimba zibandakanyeka. Qaphela ukuba ukufumanisa oko kuzuza amaninzi - umoya okanye umzimba, kunzima kakhulu.
Abantu abakhulileyo abanakwenzeka ukuba babe nempilo eninzi. Xa kudlula ixesha, izihlunu ziyancipha, ukuguqulwa komzimba kuyancipha, ukuhamba kwamalungu kuyahla. Zonke ezi zibonakaliso zandisa umngcipheko wokulahlekelwa ibhalansi kunye nokuba kungenzeka ukuwa okuyingozi. Enyanisweni, kungenxa yokuwa kwamanzi abantu abaninzi asebekhulile.
Kwi-tai chi, ezinye izivivinyo zisekelwe ekubuyiseni ubukhulu bomzimba womntu ukusuka emlenzeni omnye komnye, kwaye oku kuqinisa imisipha yemilenze kwaye kuphucula amandla okulinganisela, okubaluleke kakhulu kubantu abadala.
Ngo-2001, i-Oregon Research Institute yenze isifundo esibonisa ukuba abantu asebekhulile abanomdla wokuzivocavoca rhoqo (kabini ngesonto ngeyure) kulula ukuhamba, ukugoba, ukuphakama, ukuhla, ukugqoka, ukutya, ukuphakamisa izisindo kunokuba ontanga .
I-Tai Chi isicatshulwa esilungeleleneyo esifanelekileyo kubantu abagqithise kakhulu kuba ayifuni umzamo omkhulu. Iiklasi eziqhelekileyo ziya kunceda ukunciphisa umzimba kwaye zitshise iikhalori ezingaphezulu.
Ukuba usenza isigqibo sokuzama i-tai chi, uye kwiiklasi, ubuncinci kumaqela amabini, khetha ukuba yeyiphi na amaqela oziva ukhululekile kunye naye, indlela efanelekileyo ngayo lo mqeqeshi. Thetha kumqeqeshi malunga namava akhe, ootitshala, ixesha lokusebenza. Xoxa nabantu ababandakanyekayo kweli qela, fumana ukuba baneliseke kangakanani kwiziphumo zezifundo, umqeqeshi. I-Gymnastics kwiqela kufuneka, ngaphezu kwakho konke, uyithande. Emva koko, ukuba ubheka iwashi lonke ixesha, ngokucacileyo uxineke ngumsebenzi, kwaye akunakwenzeka ukuba ufumane iziphumo ezivelele.
Khumbula ukuba ngaphambi kokuba wenze nayiphi na imidlalo, kufuneka ufumane iingcebiso kumgqirha.
Indlela yokukrazula imisipha ye-pectoral inyanga
Kuphakanyisiwe nini ukuqhuba kwindawo
Izindlela zokuphuhlisa umdla kwimidlalo
Uthini umahluko phakathi kokulula kunye neePilates?
Ukutshatyalaliswa kwamanye amazwe
Izibonakaliso zokusatshalaliswa kwempahla kunye nezindlela zokulawulwa kwazo